Okpomoku oku na Septemba, ihe di iche | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị na-enwe mgbanwe ikuku na-adịghị ahụkebe na Spain. N’ụbọchị ndị a, etinyere aha okpomoku kachasị dị ugbua n’oge ọkọchị a, oge nke, na-akwụsị ịkwụsị, ọ dị ka a ga-egbu oge. 45,4ºC na Las Cabezas de San Juan (Seville), 42,9ºC na Xàtiva (Valencia), 39ºC in Ses Salines, Mallorca (Balearic Islands),… Ya mere, ruo 38 ógbè emefu mbubreyo n'oge okpomọkụ, ọ dịkarịa ala, na-achasi ike.
Ugbu a, ọ bụ ọkụ ọkụ?
Dabere na ndị ọkachamara si Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na State, AEMET, ebili ọkụ ga-adịgide ma ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ n'usoro ma chọpụta na ihe karịrị 10% nke obodo, ebe a ga-eru ụzọ ịdọ aka ná ntị. oroma, ihe na-eme: ngụkọta nke ógbè 38 dị na njikere maka okpomọkụ, na ọnọdụ okpomọkụ sitere na 34 na 43ºC.
Ya mere, nke nta nke nta ọ na-aghọ ihe pụrụ iche, ọ bụghị naanị n'ihi ụbọchị anyị nọ, kamakwa na ihe niile n'ihi ụkpụrụ a na-edebanye aha. Ka Modesto Sánchez Barriga, onye na-ekwuchitere AEMET kọwara, ederela ụkpụrụ dị oke oke, dịka 39ºC na Santiago de Compostela ọdụ ụgbọ elu, ndị 42,3ºC na Cáceres ma ọ bụ the 39,8ºC na Albacete.
Gịnị bụ ihe ịtụnanya a mere? Enweghị ike ịmata ya ma, mana ndị ọkachamara kwenyere na ọ nwere ike ịbụ maka ihe ịtụnanya El Niño agwụla. Mgbe ọ mere, ọnọdụ ikuku dị gbanwere nke ukwuu, yabụ a tọhapụrụ ume nke na-eme ka ikuku gbanwee nrugharị ya, dị ka Belén Rodríguez de Fonseca si kọwaa, site ná Ngalaba Nkà Mmụta Ihe Ọmụma na Ihu Igwe nke Mahadum Complutense nke Madrid.
Mgbe El Niño kwụsịrị na La Niña bịarutere, ebili mmiri na ọkọchị na-emekarị na Europe. Mana, dịka anyị kwurula, ọ kabeghị aka ime mkpebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Okpomọkụ na-efegharị na Septemba, ihe ọhụrụ
Fungi ga - ebute oria na - efe efe n'ihi okpomoku uwa